रक्त समूहअनुसार खानपान - परिकार - प्रकाशितः चैत्र १२, २०७६ - नारी
रक्त समूहअनुसार खानपान
चैत्र १२, २०७६ बेलाबखत एकै किसिमको खानाले कसैलाई फाइदा गर्छ भने कसैलाई बेफाइदा गर्छ । खाना उही हो, त्यसमा भएको पोषक तत्व उही हो, गुण अनि स्वाद पनि उही हो । हामी सोच्छौं, खाना उही भए पनि कसरी व्यक्तिअनुसार त्यसको प्रभाव फरक हुनसक्छ ? एकै किसिमको खानाले कसरी मानिसको शरीरमा फरक असर गर्छ ? त्यसले कसैलाई फाइदा गर्छ, कसैलाई किन बेफाइदा गर्छ ? रक्त समूहअनुसार पनि हामीले खाने खानामा प्रभाव पर्छ । कुन रक्त समूहको व्यक्तिलाई कस्तो खाना उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर खानपान छनोट गर्दा त्यसबाट बढी लाभ लिन सकिन्छ ।
‘ओ’ रक्त समूहका व्यक्तिहरूमा धेरैजसो एग्जिमा, एलर्जी, ज्वरो आदिको आशंका बढी हुन्छ । ‘बी’ रक्त समूहका व्यक्तिमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ । ‘एबी’ रक्त समूह भएका व्यक्तिलाई सानोतिनो बिरामीले छुँदैन । यद्यपि यो समूह भएका व्यक्तिलाई क्यान्सर, एनिमियाँ वा मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
बढी मात्रामा गहुँ र टमाटरले पनि फाइदा गर्दैन । तौल नियन्त्रण गर्न मकै, कुखुराको मासु, गहँु, बदाम आदि सेवन गर्नुहुँदैन । अण्डा, मासु, हरियो सब्जी तथा ग्रिन टीको सेवनले तौल कम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।
समूह ए र बी दुवै रक्त समूहको लक्षण ग्रुप ‘एबी’ मा पाइन्छ । यो रक्त समूह भएका व्यक्तिले शाहाकारी भोजन खानु उपयुक्त हुन्छ । फलफूल तथा सागसब्जीको प्रयोग बढी गर्नुपर्छ । रक्त समूह ‘एबी’ भएका व्यक्तिले माछा, मासु, सब्जी, अन्न, कार्बोहाइड्रेट, दूध, दूधबाट बनेका परिकार खाँदा स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ अर्थात् प्रोटिनयुक्त खाना खानुपर्छ । यस प्रकारको खाना खाँदा स्वस्थ रहन सकिन्छ । मांसाहारीहरूका लागि माछा राम्रो विकल्प हो ।
समूह ‘ओ’ सबैभन्दा पुरानो ब्लड ग्रुप हो । यो ब्लड ग्रुप भएकाहरूले उच्च प्रोटिनयुक्त खानेकुरा तथा मासु पर्याप्त मात्रामा खानुपर्छ । उच्च प्रोटिन भएको खानासँगै कार्बोहाइड्ेरट, फलफूल तथा सागसब्जीको सेवन स्वास्थ्यका दृष्टिले फाइदाजनक मानिन्छ भने दूधबाट बनेका परिकार त्यति खानु हुँदैन । रेड मिट, सी फुड, पालुंगो, ब्रोकाउली आदिले तौल कम गर्न मद्दत गर्न सक्छन् । तौल नियन्त्रण गर्न गहँु, मकै, मुसुरोको दाल, गोभी, चामल, भटमास, सिमी एवं दूधबाट बनेका परिकारबाट टाढै रहनुपर्छ । मांसाहारीमा माछा, रेड मिट तथा कुखुराको मासु सेवन गर्न सकिन्छ ।